बालकृष्ण देउजा - | Nagarik News - Nepal Republic Media
बालकृष्ण देउजाका लेखहरु :
करिब तीन दशकअघिसम्म पनि घाँस/दाउरा खोज्न बिहानैदेखि वन/पाखा धाउनुपर्थ्यो। आफ्नो खेत/बारी र निजी वनको घाँस/दाउराले धेरैको निर्वाह चल्दैनथ्यो।
बालकृष्ण देउजा २१ कार्तिक २०७७ शुक्रबार ७ मिनेट पाठ
सम्झना सरकारी रेडियोको
‘यति सानो रेडियोभित्र बसेर यस्तो मीठो गीत गाउने मान्छे कत्रा होलान् ? कहाँबाट पसे ? अब कसरी निस्कलान् ? खाजा, खाना कसले देला ?’– आँगनछेउको खाँबोमा झुण्डिएको रेडियो बज्दै गर्दा रेडियो सुनेर बसेकाहरू यस्तै रोचक जिज्ञासा व्यक्त गर्दै थिए। बालबालिकाले बूढापाकाले गरेको कुराकानी ध्यान दिएर सुनिरहे। मैले पनि उनीहरूका कुरा निकै घत मानेर सुनेँ।
बालकृष्ण देउजा २१ आश्विन २०७७ बुधबार ७ मिनेट पाठ
विपद्को त्यो क्षण
२०७२ मा सबैभन्दा बढी जोखिम बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकले फेरि पनि थप सजगता अपनाउन सकेन भने तुलनात्मकरूपमा बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ नै ।
बालकृष्ण देउजा १३ भाद्र २०७७ शनिबार ७ मिनेट पाठ
धन्न कोरनाको भरिया भइएन !
१० फेबु्रअरी २०२० देखि १७ फेब्रुअरी अर्थात २०७६ माघ २४ देखि फागुन ५ गते सम्म पर्यटन प्रवद्र्धन समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको टोली इटली भ्रमण भएको थियो । पर्यटन प्रवद्र्धन समितिको अध्यक्षको नाताले म पनि यो टोलीमा सामेल थिएँ । हाम्रो टोली फागुन २५ अर्थात फेब्रुअरी ६ मा इटलीको मिलानो एयरपोर्टमा स्थानीय समयअनुसार १२ः३० तिर पुगेको थियो ।
बालकृष्ण देउजा ७ जेष्ठ २०७७ बुधबार १० मिनेट पाठ
सरकार परिवर्तन :औचित्य पुष्टि हुन बाँकी
संसारका सबै देश यतिबेला कोरना भाइरससँग मानव अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लडिरहेका छन्। यस महामारीबाट बच्न विश्व मानव समुदाय नै लकडाउनको लक्ष्मण रेखाभित्र बाँचिरहेको छ।
बालकृष्ण देउजा २३ वैशाख २०७७ मंगलबार १२ मिनेट पाठ
बालकृष्ण देउजाका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्